Thola Inzuzo Ngenani Labantu Abangena Kuwe Nge-Bitcoin Kiosk Yethu Eku-Inthanethi | I-Paxful
Ukuthuthukisa okunamandla kwe-fiat ukuze kusekele imizamo yakho kwezobuchwepheshe
I-Paxful iyimakethe ye-Bitcoin peer-to-peer eholayo ehlinzeka ngenkululeko kwezezimali emhlabeni jikelele. I-Kiosk yethu idlulisela le nkululeko ekushintshweni kwezimali eziyidijithali ukuze kusizwe amakhasimende ayo axhase ama-akhawunti awo nge-Bitcoin. Kukhona okunye? Uthola inzuzo yenxusa ngokuzenzakalelayo kukho konke ukuthenga okwenziwa amakhasimende amasha owaletha e-Paxful, phakade.
Izinyathelo nje ezingu-3 ezilula
1. Vula i-Bitcoin kiosk yakho ebukwayo
2. Yithumele kuwebusayithi yakho noma isiteshi
3. Qoqa u-2% wenzuzo uma uthanda isikhathi ngasinye kuthengiswa okuthile
Vula i-Kiosk ye-Paxful futhi ukhuphule ibhizinisi lakho namuhla!
Yenza i-akhawunti ye-Paxful
Ngokubhalisa usuke wamukela Imigomo Yenkonzo Ye-Paxful, Imigomo Yenkonzo Yohlelo Lwenxusa, and Nesaziso Sobumfihlo
Kusetshenziswa amagama amakhulu kwezezimali eziyidijithali
Ngesixazululo sethu esingalandeli indlela evamile kushesha kakhulu futhi kulula ukufaka abasebenzisi abasha nokubenza baqale nge-Bitcoin. Amanye amagama amakhulu ebhizinisini asesebenzisa i-kiosk yethu kakade, nawe ungenza okufanayo!
Ukubambisana kwethu ne-Bitmart manje kuvumela abasebenzisi ukuba bathenge futhi bathengise izimali eziyidijithali besebenzisa i-Paxful Bitcoin Kiosk
Izinzuzo zokusebenzisa i-Bitcoin kiosk ye-Paxful
Ukusetha okusheshayo futhi kulula ukuhlela ngendlela oyithandayo
Ungayihlela ngendlela oyithandayo i-kiosk usebenzisa amanani abekiwe kakade, izindlela zokukhokha, njll, futhi ungenza ushintsho endleleni ebukeka ngayo njengombala kanye nophawu.
Akukho mali ebuyisiwe
Njengomthengisi awunayo ingozi yemali ephindiselwa emuva njengoba inkokhelo yamakhasimende akho iphroseswe ku-p2p yemakethe yethu.
Ukusekela abakhi bamasofthiwe
Sihlinzeka ngokokuhlela i-widget ngendlela oyithandayo okuthuthukile wenzela amawebusayithi nama-apps. Thola okwengeziwe kumadokhumenti ethu okwakhiwa kwesofthiwe.
Amakhasimende akho angasebenzisa noma iyiphi indlela yokukhokha kulezi ezingu-350+ futhi kungabi nemali ephindiselwa emuva.
Vula i-kiosk ye-Bitcoin
Ingabe ungumuntu ohilelekayo ekwenziweni kwezinto? Siyaqonda. Sinendlela yokukusiza! Nayi indlela yokuboniswa ngokoqobo esiyenzile ukuze ikusize uqonde indlela konke okusebenza ngayo. Lokhu kuzokusiza uqeqesheke ngokushesha.
Kubone kwenzeka ngokoqobo
Amapulatifomu okuguqulela i-fiat kwezinye izinhlobo zemali angaphezu kuka-300 atholakalayo
Amakhasimende akho angasebenzisa noma iyiphi indlela yokukhokha kulezi ezingu-350+ esizamukelayo. I-Bitcoin ifakwa ngokuqondile ku-akhawunti yakho ekushintsheni kwakho noma enkundleni.
I-Paxful isekela wonke amanethiwekhi wamabhange womhlaba. Ukudlulisela imali ebhange kaningi kwenzeka endaweni ethile, futhi amadiphozithi enzeka ngosuku.
Abasebenzisi bakho bangakhokha nganoma yisiphi isikhwama semali eyidithali esithandwayo lapho bethenga i-Bitcoin.
Indlela ethandwa kakhulu, esheshayo nelula yokukhokha yabasebenzisi emhlabeni, ukuze bazithengele i-Bitcoin.
Yamukela amadiphozithi asheshayo wasendaweni emhlabeni wonke p2p cash on-ramps ye-Paxful ekhulayo. Efanelekele kahle abangasebenzisi amabhange.
Indlela elula, ephephile nengahluphi yokuba abasebenzisi bathenge i-Bitcoin ku-inthanethi.
Abasebenzisi kalula nje bangashintsha imali yabo eyidijithali bathole ama-Bitcoin.
Akukacaci namanje? Nayi eminye yemibuzo evamile eye yabuzwa abanye abasebenzisi be-Kiosk ngaphambi kwakho, kanye nezimpendulo zethu, ukuze sikusize uqonde izinto kangcono.
Nginenkampani esaqala ye-Bitcoin futhi abasebenzisi badinga i-Bitcoin. Ngingakusebenzisa yini lokhu njengethuluzi lokusiza abasebenzisi bathenge i-Bitcoin?
Yebo. I-Paxful Kiosk iyisisombululo esingakusebenzela. Ngokusetha i-Kiosk yethu ekushintshweni kwakho kwemali, unikeza amakhasimende akho indlela elula nesheshayo yokungena.
Ngiyibhalisela kanjani i-kiosk?
Vula i-akhawunti ku-Paxful.com, ngemva kwalokho ugcwalise ifomu lesikhungo i-KYC.
Ithunyelwe kuphi i-Bitcoin yeklayenti?
I-Bitcoin yeklayenti yakho ingathunyelwa esikhwameni semali esisegameni lakho, noma esikhwameni semali seklayenti enkundleni yakho.
Ingabe ngingahlela kabusha ukubukeka nokusebenza kwe-kiosk?
Yebo. Ungahlela kabusha umbala futhi ufake olwakho uphawu.
Ishintsheka kangakanani? Ingabe ngingayihlelela izimali ezithile kuphela?
I-kiosk ikuvumela ukuba ungene kuzo zonke izimali ezisekelwa yi-Paxful kanye nezindlela zokukhokha.
Ngingumdayisi we-Paxful, ngingakusebenzisa yini lokhu njengendlela yokukhokha kuwebusayithi yami engithatha ingise ngokuqondile kokuthengiswayo kwami?
Yebo, ungahlela i-Kiosk yakho ngokuthengiswayo kwakho.
I-Kiosk iyisingatha kanjani ingozi yokubuyiselwa kwemali emuva?
Ingozi yokubuyiselwa kwemali emuva ithwalwa abathengisi enkundleni ye-Paxful. Lapho i-Bitcoin yeklayenti isithunyelwe kuwe, ayisekho ingozi yokuphindiselwa kwemali ebhizinisini lakho.
Kwenzekani uma kunombango?
Sinabasebenzi abaningi abaqeqeshiwe abangaphezu kwabantu abangu-100 abanamandla. Balamula futhi baxazulule imibango 24/7.
Ngingayisetha ngokushesha okungakanani i-kiosk yami?
Yinqubo elula yezinyathelo ezingu-3 futhi kufanele ukwazi ukwenza konke kusebenze ngemizuzu nje embalwa.
Kuphephe kangakanani kumakhasimende ami?
Kuphephe ngendlela efana neyokuhweba ku-Paxful.
Ngiyilandelela kanjani inzuzo yami?
Ideshibodi ye-Kiosk ku-akhawunti yakho ye-Paxful izokunika yonke imininingwane nezibalo zama-kiosk akho kanye neholo labo.
Imali ikhokhelwa kanjani?
Iholo lakho likhokhelwa nge-Bitcoin ngemva kokuthengiselana ngakunye, lingene ngokuqondile esikhwameni sakho semali se-Paxful.
Kungakanani ukulawula enginako? Ingabe abasebenzisi bami bayoke bayishiye iwebusayithi yami?
Cha, amakhasimende akho ngeke nanini kudingeke ukuba ashiye iwebusayithi yakho. Angathenga i-Bitcoin ngaphakathi kwewebusayithi yakho.
Iyini inqubo yakho ye-KYC? Ingabe ingahlelwa ngendlela esithanda ngayo?
Sihlele futhi salungisa isistimu ye-KYC ngokusekelwe kusofthiwe eseceleni i-Jumio. Abasebenzisi abenze i-KYC badinga i-ID, i-selfie, kanye ne-POA. Kunezigaba zokwakheka okusekelwe enanini kanye nasendaweni edinga ukuba abasebenzisi benze i-KYC.
Zingakanani izindlela zokukhokha amakhasimende ami azokwazi ukuzisebenzisa?
Amakhasimende akho azokwazi ukukhetha ukusebenzisa noma iyiphi indlela yokukhokha kwezingu-300 ezamukelekile ku-Paxful. Siqhubeka sifaka izindlela zokukhokha ezengeziwe ezintsha kulolu hlu.
Yiziphi izindlela zokukhokha ezithandwa kakhulu ku-kiosk?
Izindlela zokukhokha eziphezulu zihlanganisa ukuthumela imali ebhange, i-Paypal, i-SEPA, i-Credit Card, i-Western Union, i-Alipay, ne-Vanilla Card.
Njengomdayisi ngingakwazi yini ukufaka ilinki ye-Bitcoin Kiosk ekhasini lami lokuthengiswayo noma kunoma yiliphi elinye ikhasi?
I-kiosk eyokusetshenziswa kuwebusayithi yakho, ama-blog, naseziteshini ze-YouTube njalo njalo.
Ingabe uzosiza ekukhuthazeni ukubambisana kwethu?
Yebo, singasebenza nethimba lethu lokuthengisa nokukhangisa ukuze sithole izindlela ezihlukahlukene zokusakaza ubuhlobo obusha.
Yiziphi izindawo ezisekelayo?
I-kiosk isebenzela onke amakhasimede emhlabeni jikelele ngaphandle kwamazwe e-OFAC, njengoba kwenza inkundla yethu eyinhloko. Sinabasebenzisi abaningi ezweni ngalinye elikhulu kanye nasemalini yezwe ngalinye.
Ingabe uyilungele i-Bitcoin Kiosk yakho?
Ukusetha i-Paxful Bitcoin Kiosk kuyashesha futhi kulula. Vele uvule i-akhawunti, unikeze i-kiosk yakho igama, ngemva kwalokho uzobe usukulungele ukuqhubeka. Qala manje!